INTLIZIYO KAJEBAL SIFAH✨ | Igumbi lokulala eli-1 elinexabiso eliphantsi - I-Airbnb
INTLIZIYO KAJEBAL SIFAH✨ | Igumbi lokulala eli-1 elinexabiso eliphantsi
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguAfthab
Eli ligumbi lokuhlala elinobunewunewu lokuziphekela elijongene nebala legalufa. Yindawo ezolileyo eyi-24x7 ngokupheleleyo enoziro eziphazamisayo kwaye ilungele ukuphumla. Ummandla ukubonelela ngohlaza olwaneleyo, iilwandle, iindlela zokuhamba kunye neendawo ezikhululekile onokuzonwabela.
Kananjalo uya kuba nokufikelela kumadama okuqubha, inkundla yethenisi, iibhayisekile kunye nebala lebhola yomnyazi. Kwaye nomjikelo wegalufa ngamaxabiso ehotele.
Iveranda kunye negadi yabucala ikunika umbono ophefumlayo wohlaza, iintaba kunye nokutshona kwelanga.
Intliziyo yeJabal sifah inekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo.
Igumbi lokuhlala libonelela ngokuhlala ukuya kuthi ga kwiindwendwe ezisi-8, i-58' TV, inkqubo yesandi kunye ne-ambience elungileyo.
Ukufikelela ngokulula elunxwemeni kunye nezinye iindawo zokukhenketha.
Izibonelelo zeBBQ nazo zibonelelwe.
Ezinye izinto eziluncedo ziquka i-WIFI engenamkhawulo, i-cable TV, i-Netflix, i-Bed & Bath linen, i-Toiletries (isepha, i-shampoo, ikiti yamazinyo, i-slippers yokuhlamba), amanzi ebhotile, iti / ikofu / ubisi, kunye nazo zonke izinto eziluncedo.
Imizuzu nje engama-45 ukusuka esixekweni. Kuwo wonke umntu othanda amanzi, i-adrenaline junkies okanye abo bafuna nje ukuzama into entsha, i-Jebel Sifah kufuneka indwendwele indawo. Ukusuka kwi-jet skiing ukuya kwiibhugi zeendunduma, ukuloba ukuya enkampini, yonke imihla inokuba luhambo olukhethekileyo. Ibekwe ngaselwandle kwaye ikhuselwe ziintaba, iJebel Sifah likhaya lelona gumbi lihle yegalufa eOman. I-Jabal sifah inokufikelela ngokukhawuleza kwezinye iindawo ezidumileyo zabakhenkethi nazo.
Umbuki zindwendwe ngu- Afthab
Ndiza kufumaneka kwiindwendwe 24/7 kwifowuni malunga nayiphi na imibuzo yakho. Ndiza kuvuya ngakumbi ukukunceda malunga naziphi na iimfuno zakho. Sibhetyebhetye ngokweemfuno zakho kwaye siyakuthembisa oku kuya kuba kukuhlala okumnandi kuwe. Awunaxhala malunga nantoni na enye ehlala kwindawo yethu.
Ndiza kufumaneka kwiindwendwe 24/7 kwifowuni malunga nayiphi na imibuzo yakho. Ndiza kuvuya ngakumbi ukukunceda malunga naziphi na iimfuno zakho. Sibhetyebhetye ngokweemfuno zakho…